Ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2019-01 > Ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra
Ny sandan'ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra
Ireo andininy ao amin’ny Marka 10,17-31 dia an'ny fizarana iray manomboka amin'ny Marka 9 ka hatramin'ny 10. Ity fizarana ity dia mety ho lohateniny hoe “Ny Vidin’ny Fanjakan’Andriamanitra”. Izy io dia milazalaza ny vanim-potoana taloha kelin’ny niafaran’ny fiainan’i Jesosy teto an-tany.
I Piera sy ny mpianatra hafa vao manomboka mahazo izay fa i Jesosy no Mesia nampanantenaina. Na izany aza tsy azon'izy ireo fa i Jesosy no ilay Mesia hijaly hanompo sy hamonjy. Tsy azon'izy ireo ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra - ny vidin'ny vola nalain'i Jesosy tamin'ny fanokanana ny fiainany ho mpanjaka amin'ity fanjakana ity. Tsy takatr'izy ireo koa ny mety ho vidiny amin'ny maha mpianatr'i Jesosy azy ho lasa olom-pirenena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Tsy mikasika ny fomba hahafahantsika mividy fidirana amin'ny Fanjakan'Andriamanitra - momba ny fizarana amin'i Jesosy amin'ny fiainany maha-mpanjaka ary koa mampihavana ny fiainantsika amin'ny fomba fiainana ao amin'ny fanjakany. Misy vidiny handoa izany, ary asehon'i Mark amin'ity fizarana ity ny fanasongadinana ireo toetra enina an'i Jesosy: ny fiankinana amin'ny vavaka, ny fandavana ny tenanao, ny fahatokiana, ny fahalalahan-tanana, ny fanetren-tena ary ny finoana maharitra. Hojerentsika ny fananana enina rehetra, mandinika tsara ny fahefatra: malala-tanana.
Ny fiankinan-doha amin'ny vavaka
Voalohany dia mankany amin'i Markus isika 9,14-32. Zavatra roa no mampalahelo an’i Jesosy: amin’ny lafiny iray, dia ny fanoherana ataon’ny mpanora-dalàna, ary amin’ny lafiny iray, dia ny tsy finoana hitany amin’ny vahoaka rehetra sy amin’ny mpianany. Ny lesona ato amin’ity fizarana ity dia ny hoe ny fandresen’ny fanjakan’Andriamanitra (amin’ity tranga ity amin’ny aretina) dia tsy miankina amin’ny haavon’ny finoantsika, fa amin’ny haavon’ny finoana izay nozarain’i Jesosy amintsika tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina tatỳ aoriana.
Amin'ity tontolo ity, izay mahasosotra ny fahalemen'ny olombelona, ​​dia nanazava i Jesosy fa ny ampahany amin'ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra dia ny fitodihana aminy amin'ny vavaka amin'ny toe-tsaina tsy miankina. Inona ny antony? Satria izy irery ihany no mandoa ny vidin'ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny sorona ny ainy ho antsika tsy ho ela. Mampalahelo fa mbola tsy fantatry ny mpianatra izany.
Tohizo ao amin'ny Markus 9,33-50, dia aseho amin’ny mpianatra fa anisan’ny vidin’ny fanjakan’Andriamanitra ny fandaozana ny fanirian’ny tena ho amin’ny fanapahana sy ny fahefana. Ny fandavan-tena no fomba mahatonga ny fanjakan’Andriamanitra ho lehibe, izay nasehon’i Jesosy tamin’ireo ankizy malemy sy tsy manan-kery.
Tsy afaka nandà ny tenany tanteraka ny mpianatr'i Jesosy, noho izany fananarana izany dia manondro an'i Jesosy izay tonga lafatra ho azy. Nantsoina mba hatoky azy isika - hanaiky ny toetrany ary hanaraka ny fomba fiainany avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanarahana an'i Jesosy dia tsy mikasika ny maha-lehibe sy mahery indrindra, fa mandà ny tenanao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny olona.
Ao amin'ny Markus 10,116 dia milazalaza ny fomba nampiasan’i Jesosy ny fanambadiana mba hampisehoana fa ny vidin’ny fanjakan’Andriamanitra dia ahitana ny tsy fivadihana amin’ny fifandraisana akaiky indrindra. Nasehon’i Jesosy mazava tsara avy eo ny fomba nanehoan’ny ankizy tsy manan-tsiny ohatra tsara. Ireo izay mandray ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny finoana tsotra (fahatokiana) amin’ny zaza ihany no tena mahatsapa ny atao hoe anisan’ny fanjakan’Andriamanitra.
Rehefa nandeha indray i Jesosy dia nisy lehilahy tonga nihazakazaka ary nandohalika teo anoloany ary nanontany hoe: "Ry tompo tsara, inona no tokony hataoko hahazoana fiainana mandrakizay?" Nahoana ianao no miantso ahy ho tsara? Dia namaly Jesosy "Andriamanitra irery ihany no tsara, tsy misy olon-kafa. Fantatrao ny didy: tsy tokony hamono olona ianao, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza manambaka, tsy tokony hamono olona, ​​manaja ny rainao sy ny reninao! Tompoko, hoy ilay rangahy, efa nanaraka ireo didy rehetra ireo aho hatramin'ny fahazazako. Jesosy dia nijery azy tamim-pitiavana. Hoy izy taminy: Zavatra iray tsy mbola misy: mandehana, amidio ny fanananao rehetra, ka omeo ny mahantra ny vola, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Ary avia, manaraha ahy! Tena voa mafy ity lehilahy ity raha nahare izany ka nandao ny alahelo satria mahazo vola be izy.
Jesosy dia nijery ny mpianany tsirairay ka nanao hoe: Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny olona be amin’ny fanjakan’Andriamanitra! Dia raiki-tahotra ny mpianatra noho ny teniny; fa hoy indray Jesosy: Anaka, manao ahoana ny hasarotry ny hidirana amin’ny fanjakan’Andriamanitra! Ny rameva dia azo inoana kokoa noho ny manan-karena hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Vao mainka natahotra izy ireo. Dia iza no ho voavonjy? Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe: Tsy hain'ny olona izany, nefa tsy hain'Andriamanitra; ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary hoy Petera tamin'i Jesosy: Fantatrao fa nahafoy ny zavatra rehetra izahay ka nanaraka Anao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo: Izay rehetra mahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na saha, noho ny amiko sy ny filazantsara, dia mahazo avo zato heny ny zavatra rehetra; trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka sy saha - na dia enjehina aza - ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Fa maro izay voalohany ankehitriny no ho farany, ary izay farany no ho voalohany” (Mar 10,17-31 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Eto Jesosy dia lasa mazava tsara ny momba ny vidin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ilay mpanankarena nitodika tany amin’i Jesosy dia nanana ny zava-drehetra afa-tsy ny tena zava-dehibe: ny fiainana mandrakizay (fiainana ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra). Na dia maniry ny hahazo an'ity fiainana ity aza izy dia tsy te handoa ny vidiny lafo hananana azy io. Toy izany koa no mitranga eto toy ny amin'ny tantaran'ilay gidro fanta-daza izay tsy afaka misintona ny tànany amin'ny vela-pandrika satria tsy vonona hamela izay eo am-pelatanany izy; ka na ny mpanankarena aza dia tsy vonona ny hiala amin’ny fifikitra amin’ny harena ara-nofo.
Na dia hita aza fa be fitiavana sy mazoto; ary tsy isalasalana fa mahitsy ara-pitondran-tena, ilay mpanankarena dia tsy mahavita miatrika izay ho vokatr’izany aminy (raha jerena ny toe-javatra misy azy) raha manaraka an’i Jesosy izy (dia ny fiainana mandrakizay). Noho izany dia nandao an’i Jesosy tamim-pahoriana ilay mpanankarena ary tsy nandre momba azy intsony. Nanao ny safidiny izy, farafaharatsiny tamin'izay.
Jesosy dia nandinika ny toe-javatra nisy an-dralehilahy ary nilaza tamin'ny mpianany fa tena sarotra amin'ny manan-karena iray ny miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny marina, dia tsy ho tanteraka tanteraka izany raha tsy ampian'Andriamanitra! Mba hahatonga azy io ho mazava kokoa, dia mampiasa teny mampihomehy i Jesosy - fa ny rameva kosa namaky ny mason'ny fanjaitra!
Mampianatra koa i Jesoa fa ny fanomezana vola ho an’ny mahantra sy ny sorona hafa ataontsika ho an’ny fanjakan’Andriamanitra dia handoa (hamorona harena) ho antsika – fa any an-danitra ihany, fa tsy eto an-tany. Arakaraka ny omenay no hahazoantsika bebe kokoa. Na izany aza, izany dia tsy midika fa mahazo bebe kokoa ho setrin’ny vola omena ho an’ny asan’Andriamanitra, araka ny nampianarin’ny antokon’olona sasany izay mitory ny filazantsaran’ny fahasalamana sy ny harena.
Ny zavatra ampianarin’i Jesosy dia midika fa ny valisoa ara-panahy ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra (na amin’izao fotoana izao na amin’ny hoavy) dia hihoatra lavitra noho izay mety ho sorona rehetra azontsika atao ankehitriny mba hanarahana an’i Jesosy, na dia ahitana fotoan-tsarotra sy fanenjehana aza ireto manaraka ireto.
Rehefa niresaka momba ireo zava-tsarotra ireo i Jesosy dia nanampy fanambaràna iray hafa momba ny fahoriany ho avy:
“Efa niakatra ho any Jerosalema izy ireo, ary Jesosy nandeha teo aloha. Ary sahiran-tsaina ny mpianatra, ary raiki-tahotra koa izay niara-dia taminy; dia naka ny roa ambin’ny folo lahy indray Izy ka nanambara taminy izay hanjo Azy. niakatra ho any Jerosalema ankehitriny, hoy izy. “Any no atolotra ny Zanak’olona ho eo amin’ny fahefan’ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Hohelohiny ho faty Izy ka hatolony amin’ny jentilisa izay tsy mahalala an’Andriamanitra. Haneso azy izy ireo, handrora azy, hokapohiny ary hovonoiny amin’ny farany. Fa rehefa afaka hateloana dia hitsangana Izy” (Mar 10,32-34 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ny zavatra iray amin'ny fihetsik'i Jesosy, fa amin'ny teniny koa dia nahagaga ny mpianatra ary mampatahotra ny vahoaka izay manaraka azy. Somary tsapan'izy ireo fa efa akaiky ny krizy ary izay no izy. Ny tenin'i Jesosy dia fampahatsiahivana mazava momba ny hoe iza no mandoa ny vidiny ambony indrindra ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra - ary nataon'i Jesosy ho antsika izany. Aza adino na oviana na oviana izany. Izy no malala-tanana indrindra ary nantsoina isika hanaraka azy hizara amin'ny fahalalahan-tanana. Inona no manakana antsika tsy halala-tanana toa an'i Jesosy? Ity no zavatra tokony hoeritreretintsika sy hivavahantsika.
Ao amin'ny fizarana momba ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga ao amin'ny Marka isika 10,35-45. Jakoba sy Jaona, zanak’i Zebedio, nankany amin’i Jesosy mba hangataka toerana ambony ao amin’ny fanjakany. Sarotra inoana fa tena feno olona sy tia tena izy ireo. Kanefa, fantatsika fa ny toe-tsaina toy izany dia latsa-paka lalina ao amin’ny toetrantsika olombelona lavo. Raha fantatr’ ireo mpianatra roa ireo ny tena vidin’ ny toerana ambony toy izany ao amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra, dia tsy ho sahy nanao izany fangatahana izany tamin’ i Jesosy izy ireo. Nampitandrina azy ireo i Jesosy fa hijaly izy ireo. Tsy voatery hidika anefa izany fa hitondra toerana ambony ho azy ireo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra izany, satria tsy maintsy hijaly ny rehetra. An'Andriamanitra irery ihany ny fanomezana toerana ambony.
Ireo mpianatra hafa, izay tsy isalasalana fa mihevitra ny tenany ho toa an'i James sy Jaona, dia sosotra noho ny fangatahan'izy ireo. Ireo toeran'ny fahefana sy laza dia mety ho maniry iray ihany koa. Izany no antony anomezan'i Jesosy tamim-paharetana azy ireo ny hasina hafa rehetra momba ny Fanjakan'Andriamanitra, izay asehon'ny tena fahamboniana ny asa fanompoana.
I Jesosy mihitsy no ohatra voalohany amin'izany fanetren-tena izany. Tonga Izy hanome ny fiainany ho mpanompon ’Andriamanitra mijaly, araka ny efa nambara ao amin’ ny Isaia 53, ho «avotra ho an’ny maro».
Ny finoana maharitra
Ny fizarana momba ny lohahevitray dia mifarana amin'i Markus 10,46-52, izay ilazana fa Jesosy dia nandeha niaraka tamin’ny mpianany avy tany Jeriko hankany Jerosalema, izay hijaly sy hahafatesany. Teny an-dalana izy ireo dia nifanena tamin’ny lehilahy jamba iray antsoina hoe Bartimeo izay niantso an’i Jesosy mba hamindra fo. Nampahiratra ny jamba i Jesosy ary nilaza taminy hoe: “Ny finoanao no nanampy anao”. Tonga niaraka tamin’i Jesosy i Bartimeo.
Voalohany, lesona ho an'ny finoana ny olombelona, ​​izay tsy lavorary ary mbola mandaitra raha maharitra izany. Amin'ny farany, dia momba ny finoana an'i Jesosy mitohy sy tsy lavorary hatrany.
Amin'izany fotoana izany ny vidin'ny fanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony horesahina indray: ny fiankinana amin'ny vavaka, ny fandavana ny tenanao, ny tsy fivadihana, ny fahalalahan-tanana, ny fanetren-tena ary ny finoana maharitra. Miaina ny Fanjakan'Andriamanitra isika rehefa manaiky sy mampihatra ireo toetra ireo. Mampatahotra kely ve izany? Eny, mandra-tsapantsika fa ireo dia an'i Jesosy tenany - toetra izay zarainy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina amin'ireo izay matoky azy sy mino azy amim-pahatokiana.
Ny fandraisantsika anjara amin'ny fiainana ao amin'ny Fanjakan'i Jesosy dia tsy lavorary tanteraka fa rehefa manaraka an'i Jesosy dia "mamindra" antsika izany. Izany no fomba fahombiazana kristiana. Tsy ny hahazoana toerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra - izany toerana izany ao amin'i Jesosy no ananantsika. Tsy momba ny hahazoana ny fankasitrahan'Andriamanitra izany - fisaorana an'i Jesôsy no ankasitrahan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny hombantsika amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fiainany. Ananany avokoa ireo toetra rehetra ireo sy be dia be ary vonona ny hizara azy ireo amintsika, ary io mihitsy no ataony amin'ny alàlan'ny fanompoana ny Fanahy Masina. Ry malala sy mpanara-dia an'i Jesosy, sokafy ny fonao sy ny fiainanao manontolo amin'i Jesosy. Manaraha azy dia raiso aminy! Tongava ao amin'ny fahafenoan'ny fanjakany.